Man United Oo Bedelka Marcus Rashford Dalabkiisii Diyaarisay, Mourinho Oo Daafac Ka Doonaya Premier League & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Muxuu hadalkii Muuse Biixi u dhimi karaa qorshihii uu damacsanaa Abiy Axmed?
DAGAAL siyaasadeedka u dhaxeeya dalalka Jabuuti iyo Kenya oo meel xun gaaray
Netanyahu: Xiriir ayaan la leenahay dalalka Carabta oo idil marka laga reebo laba
Agaasimeyaashii iyo Taliyeyaashii PMPF oo xilalkii laga qaaday iyo kuwo cusub oo la magacaabay
Mareykanka oo ka hadlay dilkii Wariye Cabdiwali Cali Xasan
Man United Oo Bedelka Marcus Rashford Dalabkiisii Diyaarisay, Mourinho Oo Daafac Ka Doonaya Premier League & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
January 21, 2020 | Filed under: CAYAARAHA | Posted by: Apdihakem Omer Adem
Waxaanu halkan hoose idiinku soo koobnay wararka suuqa ee qaarada Yurub kuwoodii ugu muhiimsanaa ee ay warbaahinta kala duwani maanta oo Salaasa ah ay ka qoreen kubadda cagta.
Inter Milan ayaa doonaysa inay Tottenham u bandhigto dalab 12.8 Milyan ah oo lagu daray gunnooyin si ay Christian Eriksen ugala wareegto bishan January. (Guardian)
Tottenham ayaa dhinaceeda kaliya ogolaan doonta in Eriksen uu ka baxo oo uu ku biiro Inter haddii ay hesho dalab 17 Milyan ah. (Mail)
Manchester United ayaa diyaarinaysa dalab 43 Milyan ah oo ay ku doonayso weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele kaddib dhaawaca gaadhay Marcus Rashford. (Foot Mercato, via Manchester Evening News)
Liverpool ayaa ah kooxda uu doonayo weeraryahanka RB Leipzig ee Timo Werner kaas oo kaasoo doonaya ka ciyaarista horyaalka Premier League. (Bild, via Sport Witness)
Manchester United ayay tahay inay lacago fiican ka bixiso weeraryahanka PSG ee Edinson Cavani halkii ay heshiis amaah ah ku dalban lahayd balse 32 sano jirkaas ayaa u furan inuu bishan koox ku biiro. (Manchester Evening News)
Sporting Lisbon caawiyaheeda tababare ee Emanuel Ferro ayaa hoos u dhigay suurogalnimada uu kooxda bishan January kaga baxayo Bruno Fernandes oo Man United bar-tilmaameed u ah. (A Bola, via Mirror)
Manchester United ayaa haddii ay ku hungowdo saxeexa Bruno Fernandes bedelkiisa u dhaqaaqi doonta khadka dhexe ee Inter Milan ee Matias Vecino. (Sky Italy, via Mirror)
Garabka kooxda Crystal Palace ee Wilfred Zaha ayaa u sheegay kooxdiisa inuu sii joogayo ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka xilli aysan jirin koox doonaysa bixinta lacagta 80-ka Milyan ah ee ay Eagles ku qiimaynayaan. (Mail)
Shaqada tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa ah mid amaan ah oo aan laga caydhin doonin xataa haddii ay kooxdaasi ku fashilanto inay Europe League usoo baxdo sanadka dambe. (Sun)
Inter Milan ayaa ku dhaw inay dhammayso heshiiska amaahda ah ee ay kula wareegayso xiddiga Chelsea ee Victor Moses oo dib ula midoobaya tababarihiisii hore ee Antonio Conte, Fenebrahce oo uu haatan amaah ku joogo 29 sano jirkani ayaan u diidi doonin inuu dhinaca Nerazurri u wareego. (Mail)
Liverpool ayaa rajaynayn inay gudaha bishan dirto xiddiga kooxdeeda ee Xherdan Shaqiri xilli uu xiiso ka helayo kooxda Roma. (Sky Sports)
Tottenham ayaa lagu soo warramayaa inay dalab ka gudbinayso daafaca Sheffield United ee Jack O’Connell kaas oo ay u arkaan bedelka mudada dheer ee daafacooda Jan Vertonghen oo 32 sano jir ah. (Star)
Manchester United ayaa qirsan inay Real Madrid guuldarro kagala kulmeen saxeexa khadka dhexe ee Ajax ee Donny van de Beek (Star).